Ukwakha i-Drawing Kit Ngaphandle kweepensela
Imfuno yomzobo wepensile zizinto eziphambili, kodwa kukho izinto ezimbalwa ezifunekayo ukuba ufanele ukwenze ngokufanelekileyo. Nantsi i-down-down down kit kunye ne-extra extras.
Ngokomntu, ndikhetha ukukhangela ipencil yesimbi yesibini. Uphuculi lwe-canister olugcina i-shavings ephelele ukuhamba. Ukunciphisa ukutshabalalisa nokuphazamiseka, ngokukodwa kwimizila engabikho kakuhle, abaninzi abaculi banqwenela ukusebenzisa i-knife craft.
Ukuba ukhetha olu khetho, qiniseka ukuba unomdla kwaye uhlale unqumle ngeqebunga elihamba kude nomzimba. Ukuba usebenzisa ipenseli eninzi, unokukhetha ukucima ipenseli kagesi, ukhetho lwabafundi abaninzi.
I-sandpaper efanelekileyo kakhulu iluncedo ekukhanyiseni iphuzu lakho ipensile ngexesha lokudweba. Yisebenzise kwakhona ukucoceka kakuhle i-tortillon (iphepha lokuxuba iphepha)
Tortillon kunye nezinye izixhobo zokuHlanganisa
I-tortillon, okanye iphepha lokudibanisa iphepha, lukhuni oluxinzekileyo lwephepha elinamaphepha, ngenxa yokugubha kunye nokudibanisa. Ukusebenzisa i-tortillon kunokuba iminwe ivimbele i-oyile yesikhumba ukuba ingonakalisi iphepha kwaye ivumela amanqaku ukuba aphinde asebenze - i-fingertips i-greasy ingenza i-finger-smudges ingcolile kwaye inzima ukuyicima. Iimpawu zombala ze-Rubber-shapeders kunye ne-pastel mixers nazo zincedo kwezinye iimidiya, okuvumela indawo ezincinci ukuba zisebenze. Isikhumba se-chamois sisetyenziselwa ukufaka isicelo, siphakamise kwaye sidibanise imidiya.
Iinqwelo ezihlawulekayo zinceda kakhulu ukucima zonke iintlobo zeendaba.
Xa omnye umhlaba ungcola ungayidonsa kwaye uyifake kwindawo ecocekileyo. Sebenzisa isiqununu esikhulu kwiindawo ezinkulu, okanye uyifake kwisiqendu kwaye usebenzise nge-twist ukucima amabala amancinci. Abaculi abaninzi bafunga nge-'Blue Tack 'okanye ama-adhesive afutshane afana nawo njengendlela efanelekileyo.
Elasers White Erasers
Umphunga omhlophe weplastiki weplastiki uya kulungelelanisa kwaye uphelele kwi-touch - ukuphepha ezo zinto ezincinci, ezinzima, eziqinileyo eziqhelekileyo ziza kunye nenqaku lokukhangisa eliprintiwe kubo.
Ngokuqhelekileyo ndigcina ezininzi kwiindawo, ukuze ndihlale ndihlambulukile ukucima indawo ezikhanyayo okanye izinto ezintle. Ukuqhayisa ngesamba somhlaba ococekileyo. Amashishini omlilo athandwa ngabantu abenza imifanekiso njengokuba bakwazi ukuchithwa kwendawo kunye nokucoca ngokukhawuleza kweendawo ezinkulu.
UMlawuli, T-Square, kunye neFlexicurve
Ukudweba isakhelo sokusebenza kuyo kunokukunceda usebenze ngokuqulunqwa okupheleleyo kunokuba nje ujikeleze into ephepheni lakho, kwaye ugcine umda kwiphepha ukuba ufuna ukuyibeka ifom. Umlawuli kunye ne-T-square zibalulekile ekuboneni umzobo. Thenga ubukhulu obufanelekileyo kumlinganiselo womsebenzi owenzayo. I-flexicurve ayibalulekile, kodwa inokuba luncedo kakhulu ekudaleni iirebhile ezibushelelekileyo, ngakumbi xa zidweba izinto ezifakweyo ezifunekayo.
Abaninzi abaculi basebenzisa umgca omncinci / uchukumisekile ukubonisa iinkcukacha ezimhlophe, ucinezela umgca phantsi uze udibanise phezulu. I-plastic knitting needle isebenza kakuhle; ngenxa yomsebenzi omhle kakhulu, inaliti enkulu yokufunyanwa ilungile. Ungayibhalela ipencilisi, okanye ususe iso kwaye usebenzise ipensele ye-clutch njengomnini (njengencomo nguMike Sibley). Unokubeka i-nail enkulu enokuqhaqhazela ngesiqwenga seendodolo, kwaye unxweme kwinqanaba elifanelekileyo.
Indlela yokukhetha izixhobo zobuGcisa zeZipho
Indlela yokuvula ifayile yeGEDCOM kwi-Your Genealogy Software
Funda ukuhluka phakathi "Yenza" kwaye "Yenza"